Gobalka Karkaar degaano katirsan oo abaar lagaso sheegayo (dhegayso) – Radio Daljir
Gobalka Karkaar degaano katirsan oo abaar lagaso sheegayo (dhegayso)
Febraayo 20, 2018 12:32 g 0
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Cabdulaahi Maxamed Barre (Caato), ayaa ka warbixiyay xili uu warraysi gaar ah siinayay idaacadda daljir xaallada Abaareed ee ka jirta gobolka iyo deegaannada hoos-yimaada .
Mudane Caato ayaa sheegay in abaar xooggan ay ka jirto gobolkaasi ,taasi ooo saamaysay durba dadka iyo duunyada .
Waxaa intaas ku darray in xilligaan biyo la’aan ,caafimaad daro ,iyo xoolaha oo dabar dareeyay ay ugu darran tahay gobolka.
Ugu dambayntii masuulka ayaa ugu baaqay dawladda Puntland iyo Hay’addaha caalamiga ah ee gargaarka bixiya in xaalladdu inta aysan faraha ka bixin in la soo gaaro dadkaasi.
Wariyaheenna Axmed Sheekeeye ayuu khadka telefoonka ee Magaaladda Garoowe ugu warramay isagoo Qardho jooga .
Saraakiil UNKA kasocda oo gaaray Magaaldda dhuusomareeb (Sawiro)
Maamulka Gobalka Nugaal oo soo bandhigay Timir dhacday oo koonfurta Somaaliya lagu waday (dhegasyo_Sawiro)